Geerida Ayaa Dhaanto. | Voice Of Somalia
Geerida Ayaa Dhaanto.
Posted on December 28, 2015 by Voice Of Somalia Image
Qore: Omar Inshar
Wasaarada shaqada Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in ay gabdho Soomaali ah oo khadaamooyin ah ( Booyaaso ) “gabdhaha guryaha kashaqeeyo “ ay ka keeni doonaan Soomaliya ayagoo kaashanaayo xafiis ay Nairobi ku leeyihiin
Warbaahinta Sacuudiga yaa warkaas lagu baahiyay — wararka qaar ayaa sheegaayo in nidaamka Xassan Sheekh u saxiixay Sacuudiga inay gabdhaha Somaliyeed guryaha ooga shaqeeyaan .
Shaqo ceeb ma ahan laakiin waxaa is weydiin mudan mataqaanaan dhaqanka dadka Sucuudiga?
Dowlada indonesia ayaa ku dhawaaqday in ay 7000 kun oo dumar Indonisiaan ah oo guryaha Khaliijk ka shaqeeyo ay dib wadanka oogu soo celin doonaan wadankoooda, dowlada Indonesia ayaa ku tilmaamtay in sidii xoolaha oo kale loola dhaqmo gabdhahooda taasna aan la aqbali karin .
Way jiraan dad wanaagsan laakiin inta badan dadka Sucuudiga bin aadamba u ma arkaan gabdhaha iyo darawaliinta u shaqeeyo mararka qaar wayba dilaan!.
“Inaad gaajo u dhimato ayaa kafiican in aad silic iyo saxariir iyo ihaano u dhimato ”
Wadamo Aasiyaan ah oo dumarkooda ka shaqeyn jireen Khaliijka ayaa dib u ceshaday diidayna inay u soo diraan Sacuudiga iyo wadamada dhaqanka xun ee la midka ah.
” Aniga waxaan indhahayga saaray gabar yar oo Muslimad Indonesiyad ah oo shaqaalo ah lana socoto 4 gabdhood oo waa weyn oo Khaliijiyiin ah waxay wadaa gabadha shaqaalaha ah labo boorso oo waa weyn gacantana waxay haysaa canug yar halka naagahaas waaweyn ee afarta ah iska laa fyoonayaan !
“Doodan waxaan u leeyahay dumarkiyo caruurtoo
Dadkii idinka waynaa hadday idin duleeyeen
Dambi kama ay yaabine cuntay idinka doortee
Duunyaa la dhaafsaday dugsigaad galeeyseen
Dameerkuna ma yeelen halkay talo ku daysteen
Dab intay shideen bay dalaq idinku siiyeen
Doox intay qodeen bay ciid idinku daadsheen
Nin idiin damqanayaa idinkama dambeeye
Hadaydaan digtoonaan daad bay idin qaadiye”
DAAWO SIDA LOOLA DHAQMO DUMARKA MUSLIMIIMTA AH EE SACUUDIGA U SHAQA TAGA.
Caqliga Siyaasiyiinta Soomaalida Maanta Waxuu Marayaa in General Gabre Cabsi ay ka Qabaan Darteed Wax Kasta uu ku Amro in ay Saxiixaan.
DHAGEYSO:- Abwaanad Roda (Afjano) oo gabay ay HIILO ugu wanqashay soo saartay